फिल्म ‘मारुनी’मा तेश्रो लिङ्गीको भूमिकामा सम्राज्ञी ? « Intro Nepal
फिल्म ‘मारुनी’मा तेश्रो लिङ्गीको भूमिकामा सम्राज्ञी ?
Published On : २१ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:१०
फिल्म मारुनीको ट्रेलर सोमवार सार्वजनिक भएको छ । नायिका सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, पुष्प खड्का र रेबिका गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मको ट्रेलरले फिल्मको कथावस्तु प्रती झनै उत्सुकता थपिदिएको छ । फिल्म घोषणा भएदेखी नै चर्चामा रहेको छ । फिल्मको घोषणा कार्यक्रममा एक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको थियो जसमा पुष्प र सम्राज्ञीको आधा आधा शरीर जोडिएको थियो । उक्त पोस्टरले दर्शकमा फिल्म प्रती कौतुहलता बढाएको अवस्थामा ट्रेलरमा समेटिएका केही दृश्यले झनै कौतुहलता थपिदिएको छ ।
फिल्मको ट्रेलर हेर्दै गर्दा फिल्ममा मुख्य भूमिकामा रहेकी नायिका सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले तेश्रो लिङ्गी (ट्रान्सजेन्डर)को भूमिका निर्वाह गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । फिल्मका केही त्यस्ता दृश्य छन् जसले यो अनुमानलाई सही सावित गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गरेका छन् :
फिल्मको नाम ‘मारुनी’ – मारुनी एक नृत्य हो जुन विशेषत नेपालका मगर, कुमाल, गुरुङ, तामाङ, लिम्बू जातीहरूको मुख्य संस्कृतिको रुपमा रहँदै आएको छ । यस नृत्यमा भर्खरका कलिला केटा मान्छेलाई केटीहरुको परम्परागत लुगाहरू लगाएर ‘मारूनी’ बनाई मादलको तालमा पुराना पौराणिक कथाहरूमा आधारीत गीतहरू गाएर नाचिने गरिन्छ ।
शिव-पार्वतीको अर्ध नारीश्वर चित्र : ट्रेलरको सुरुवात मै नायिका शाहलाई पृष्ठभूमिमा शिव-पार्वतीको अर्ध नारीश्वर चित्रको फ्रेम अगाडीबाट हिनेको देखाइएको छ । साम्राज्ञीको प्रवेश त्यही चित्रको अगाडी बाट हुनुले पनि यो कुरालाई सम्भावित बनाएको छ ।
सम्राज्ञीको मेकअप र गेटअप – फिल्ममा साम्राज्ञीको मेकअप र गेटअप सामान्य भन्दा फरक लाग्छ । ट्रेलरमा देखाइएका गीतका केही अंश छोडेर अन्यमा साम्राज्ञीको मेकअप र गेटअप सामान्य महिलाको जस्तो लाग्दैन । कता कता मेकअप र गेटअपले पनि फिल्ममा सम्राज्ञीको ट्रान्सजेन्डर भूमिकालाई प्रस्ट्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ ।
फिल्मको ट्रेलरको अन्त्यमा देखाइएका बालकलाकार : फिल्मको ट्रेलरमा एक बालकलाकारलाई देखाइएको छ जसको खुट्टामा पाउजु र ओठमा लाली (महिलाको शृंगार सामाग्री) लागाएको देख्न सकिन्छ । सांकेतिक रुपमा बाल्यावस्था देखी नै साम्राज्ञीमा महिला पुरुष दुवैको गुण रहेको देखाउन उक्त दृश्यको प्रयोग गरिएको भान हुन्छ ।
फिल्मको ट्रेलरको बिच तिर एउटा टेक्स्ट एनिमेसन राखिएको छ जसमा पहिला ‘To Get Her Love’ लेखिएको छ र पछि ‘To Get His Love’ देखाईएको छ । त्यो एनिमेटेड टेक्स्टमा अरु केहि परिवर्तन हुँदैन बस ‘Her’ र ‘His’ परिवर्तन हुन्छ, साम्राज्ञीले ओठको लाली पुछेको देखाइनु, ऐनाको अगाडी बसेर पहिला बिना शृंगार हाँस्नु, पछि चुरा, टिका लगाएर साडीमा सजिएर निस्कनु, एक डाइलगमा फिल्ममा सम्राज्ञीको बुवा बनेका अर्जुन श्रेष्ठले सम्राज्ञीलाई ‘तँ’ सम्बोधन गर्नु लगायतले पनि फिल्ममा सम्राज्ञी तेश्रो लिङ्गी (ट्रान्सजेन्डर)को भूमिकामा रहेको अनुमान लगाउने आधारहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
हाम्रो अनुमान सही हो या गलत त्यो त फिल्म प्रदर्शन पश्चात थाहा होला । तर, यदी सोही भूमिकामा साम्राज्ञी प्रस्तुत भएकी हुन् भने सधैँ एकै खालको भूमिकामा अभिनय गरेको आरोपबाट उनले मुक्ति पाउने छिन् । यो फिल्म भदौ १३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउनेछ ।